Politics & Security Archives - Page9of 10 - Xinhua News Agency
(၁၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ အလွတ်သဘောအစည်းအဝေး (13th ACDFIM) တက်ရောက်ရန်အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာအိုနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာ
ရန်ကုန်၊မတ် ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၁၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်များအလွတ်သဘောအစည်းအဝေး (13th ACDFIM) သို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။
အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း တရားဝင် တည်ထောင်လိုက်ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ပြောကြား
ကွာလာလမ်ပူ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) အာဆီယံ သမိုင်းကြောင်းတွင် အရေးပါသော မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်းအား ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်တွင် တရားဝင် တည်ထောင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်နီဖာ အမန်း (Anifah Aman) က သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်...
လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဒေသတွင်း တရားဝင် သံန္နိဠာန် အာဆီယံ အတည်ပြု
ကွာလာလမ်ပူ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) အာဆီယံ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များသည် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပထမဆုံး ဒေသတွင်း ဥပဒေ မူဘောင်အား နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်က လက်မှတ် ရေးထိုးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၂၇ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး အား မလေးရှား နိုင်ငံ တွင် စတင်ကျင်းပ
ကွာလာလမ်ဘူ ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ ( အာဆီယံ) အသင်း ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာ လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် မလေးရှား နိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ မြို့တွင် စတင်ကျင်းပ ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး တွင်...
မဲခေါင်စြင်္ကံလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှ လမ်းပိုင်းများအဆင့်မြှင့်တင်ရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁ဝဝ ပံ့ပိုးကူညီမည်
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ(GMS) အရှေ့-အနောက် စြင်္ကံလမ်းမကြီး၏ မချိတ်ဆက် မိသောလမ်းပိုင်းဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ အိန္ဒုနှင့် ကော့ကရိတ်မြို့ များ အား ချိတ်ဆက်ပေးသော ၆၆. ၄ ကီလိုမီတာ ရှိ လမ်းပိုင်းတစ်ခုပြုပြင်မွမ်းမံရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) က...
အာဆီယံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတွင် ဆွေးနွေး
ဖနွမ်းပင်၊ စက်တင်ဘာ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိများသည် တနင်္လာနေ့၌ ကမ္ဘောဒီး ယားနိုင်ငံတွင် တွေ့ဆုံ၍ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းများအား ဆွေးနွေးကြကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အကြီးတန်း အရာရှိက ပြောသည်။
အခြေခံ အဆောက်အဦး ပိုမိုလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများအား ထောက်ပံ့ပေးရန် တရုတ် ကတိပြု
ကွာလာလမ်ပူ၊ သြဂုတ် ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ အပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများအတွက် အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်သော အခြေခံ အဆောက်အဦးများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ထောက်ပံ့ပေးရန် ရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝမ်ရိ က ပြောသည်။
နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းမှု ပိုမို တိုးမြှင့်ရန် တရုတ်နှင့် မလေးရှား ကတိပြု
ကွာလာလမ်ပူူ၊ သြဂုတ် ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝမ်ရိ နှင့် မလေးရှား နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ် ရာဇတ် တို့သည် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ မြို့၌ တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ကတိပြုခဲ့ကြောင်း...
ကွာလာလမ်ပူ၊ သြဂုတ် ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ် နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ (ASEAN) တို့ကြား စီးပွားရေး အပါအဝင် နေရာ အားလုံးနီးပါး တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုများသည် အရှေ့ အာရှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၌ ဦးဆောင်မှုပိုင်းမှ ပါဝင်လာ နိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။
ကွာလာလမ်ပူ၊ သြဂုတ် ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝမ်ရိသည် မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အန်နီဖာ့ အေမန်၏ ဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ သြဂုတ်လ ၄ ရက် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၄ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ပြုလုပ်မည့်...
Politics, Law & Military15 mins ago
Archived News Select Month May 2022 (324) April 2022 (380) March 2022 (463) February 2022 (426) January 2022 (425) December 2021 (416) November 2021 (401) October 2021 (309) September 2021 (342) August 2021 (303) July 2021 (305) June 2021 (433) May 2021 (376) April 2021 (267) March 2021 (193) February 2021 (154) January 2021 (464) December 2020 (480) November 2020 (394) October 2020 (450) September 2020 (447) August 2020 (531) July 2020 (490) June 2020 (450) May 2020 (436) April 2020 (424) March 2020 (436) February 2020 (339) January 2020 (313) December 2019 (408) November 2019 (361) October 2019 (410) September 2019 (424) August 2019 (392) July 2019 (448) June 2019 (393) May 2019 (455) April 2019 (448) March 2019 (493) February 2019 (471) January 2019 (527) December 2018 (508) November 2018 (476) October 2018 (537) September 2018 (500) August 2018 (557) July 2018 (565) June 2018 (579) May 2018 (565) April 2018 (483) March 2018 (577) February 2018 (470) January 2018 (470) December 2017 (408) November 2017 (449) October 2017 (482) September 2017 (492) August 2017 (521) July 2017 (552) June 2017 (512) May 2017 (446) April 2017 (401) March 2017 (466) February 2017 (460) January 2017 (568) December 2016 (439) November 2016 (467) October 2016 (475) September 2016 (483) August 2016 (531) July 2016 (513) June 2016 (482) May 2016 (546) April 2016 (401) March 2016 (454) February 2016 (435) January 2016 (363) December 2015 (366) November 2015 (329) October 2015 (348) September 2015 (282) August 2015 (282) July 2015 (269) June 2015 (117) May 2015 (127) April 2015 (67) March 2015 (48) February 2015 (89) January 2015 (67) November 2014 (2) August 2014 (3) December 2013 (1)